Disinfection & Sterilization Fekitori | China Disinfection & Sterilization Vagadziri uye Vatengesi
YQG Nhepfenyuro Yemishonga Washer
GMP ma washer anogadzirwa ne SHINVA zvinoenderana neazvino GMP uye inogona pre-kusuka, kusuka, kusuka uye kuoma zvigadzirwa. Maitiro ekuwachisa anodzokororwa uye anorekodiwa, nekudaro anokwanisa kugadzirisa zvachose kusagadzikana kwehunhu hwekuwachisa maitiro. Aya akateedzana ma washer anosangana ne FDA uye EU zvinodiwa.
GD Series Yakapisa Heat Sterilizer
Dry kupisa sterilizer inonyanyo shandiswa yekuvharisa kwepamusoro tembiricha inoshingirira zvinhu. Iyo inoshandisa kutenderera mweya unopisa sekushanda midhiya yekudzivirira uye depyrogenation uye inosangana neChina GMP, EU GMP uye FDA zvinodiwa. Isa zvinyorwa mukamuri, tanga kubereka kutenderera, wozotenderedza feni, kupisa mapaipi nemavharuvhu emhepo zvinoshanda pamwechete pakupisa nekukurumidza. Nerubatsiro rwekutenderera feni, iyo yakaoma inopisa mweya inoyerera ichipinda mukamuri nenzira yepamusoro tembiricha inodzivirira HEPA uye inoumba yunifomu yemhepo kuyerera. Unyoro huri pamusoro pezvinyorwa hunotorwa nemhepo inopisa inopisa uye ndokuzoburitswa kunze kwekamuri. Kana tembiricha yekamuri yasvika pane imwe kukosha, iyo vharuvhu yekuzadza yakavharwa. Iyo yakaoma inopisa mweya inotenderera mukamuri. Nemhepo inopinda mukati mekunwa, iyo kamuri ine kumanikidza kwakanaka. Mushure mekubvisa chikamu chekuvharisa, mweya nyowani kana kutonhora mvura inlet vharuvhu yakavhurika kutonhora. Kana tembiricha ichidonha kune yakatarwa kukosha, otomatiki mavharuvhu anovhara, uye inonzwika uye inoonekwa alamu inopihwa inoratidza chiratidzo chekuvhura musuwo.